मेरी कोमसंग 'रिङ' मा तीन राउण्ड ! - Khelpati
मेरी कोमसंग 'रिङ' मा तीन राउण्ड !
बिहिवार, असार २६, २०७६ गिता राई
काठमाडौं । विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेकी मेरी कोमसँग तीन राउन्डसम्म बक्सिङको रिङमा टिक्नु नेपाली खेलाडीका लागि सामान्य कुरा होइन ।
यो प्रसङ्ग किन पनि आवश्यक छ भने हामी नेपाली चेली माला राईको चर्चा गर्न गईरहेका छौ ।
३५ वर्षीया माला नेपालकी चर्चित महिला बक्सर हुन् । दोस्रो संस्करणको इन्डियन ओपन अन्तराष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा मालाले भारतकी चर्चित खेलाडी मेरी कोमसंग प्रतिस्पर्धा गरिन् ।
महिला ५१ केजी तौल समूहमा अंंकको आधारमा ५–० ले कोमसँग पराजित भएपनि माला खेलको तीनै राउण्ड रिङमा टिकेकी थिईन् ।
‘कोमसँगको प्रतिस्पर्धा सबैले राम्रो मौका भएको बताएका थिए । केही गरेर देखाए राम्रो अवसर पाउने भनेका थिए । सबैको हौसलाले आत्मविश्वास पलाएको थियो । तर भारतीयले एक राउन्ड पनि टिक्दैन भनेर दाबी गरेका थिए । म सिधै नकआउट हुन्छ भन्ने उनीहरुले सोचेका थिए । नेपालले अर्काे प्रतिस्पर्धी ठिक पारे हुन्छ समेत भनेका थिए ।’ कोमसंग खेल्नु अघिको क्षण माला सम्झिन्छिन् ।
उनले थपिन्, ‘मलाई गुरुहरुले धेरै सहयोग गर्नुभयो । तिमीले देखाउने ठाउँ यहीं हो, राम्रो खेलेर देखाउ भन्नुभएको थियो । मनमा डर त थियाे । मसँग अनुभवको पनि कमी थिएन ।’
मालाको स्वभाव नि उस्तै छ । उनी कहिल्यै हार नमान्ने स्वभावकी खेलाडी हुन् । मनमा अनेकौ कुरा खेलाउँदै उनी रिङमा उत्रिईन् । खेलमा उनी कोमसंग पराजित भईन् । तर तीनै राउण्ड टिकेर भारतीय खेलाडीको अनुमानलाई गलत साबित गरिन् ।
खेल उनले हारिन् । तर कोमसंगको प्रतिस्पर्धापछि उनलाई केही गर्ने आत्मविश्वास बढेको छ । ‘भेरी स्ट्रङ गर्ल, यू क्यान डू बेटर’ खेलपछि कोमले मालालाई भनेकी थिइन् ।
मेरीको प्रतिक्रियाले माला उत्साहित बनिन् । अझ राम्रो अभ्यास गरेर राम्रो खेल्छु भन्ने आत्मविश्वास उनमा पलायो ।
‘नेपाल फर्किएर राम्रो अभ्यास गर्ने सोचेको थिए । तर अवस्था अनुकुल बनेको छैन । तर अभ्यास गरिरहेको छु । फेरी भेट भयो भने राम्रो खेल्छु होला ।’ माला भन्छिन् ।
अनुभवका कारण नेपाली खेलाडीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो प्रर्दशन गर्न नसकेको मालाको बुझाई छ ।
‘हामीमा अनुभवको धेरै कमी छ । उनीहरु खेल्नु अघि एक घण्टा जति व्यक्तिगत फिजियोथेरापी गर्छन् । हामी एक कुनामा अलिकति जिउ तन्काउदै बस्न पर्छ ।’ मालाको अनुभव छ, ‘खेल सकिएपछि उनीहरुको अलग्गै एक घण्टाजति मसाज हुन्छ । हाम्रो भने खेल सकिएपछि सबै सक्कियो ।’
‘अलिकति मनमा नराम्रो लाग्दो रहेछ । उनी (मेरी) त्यसरी तयारीका साथ आएकी थिईन् । आफ्नो तयारी भने बिजोग नै देखिन्थ्यो ।’ उनले थपिन्, ‘मेरीलाई रसियन प्रशिक्षकले २ वर्ष प्रशिक्षण गराएको रहेछ । तर हामी एक हप्ता ट्रेनिङ गरेर गएको थियौ ।’
राम्रो ट्रेनिङको अवसर पाए कोमलाई अझ टक्कर दिन सकिने मालालाई लागेको छ ।
‘हामी दुवैसँग अनुभव छ । फरक भनेको उसलाई सुविधाहरु धेरै छ । सरकारले हेरेको छ । हामी जाने र खेल्ने मात्र भएको छ । कोमको जस्तो ट्रेनिङ, सुविधा पाएमा टक्कर दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।’ माला भन्छिन् ।
नेपालमै राम्रो प्रशिक्षक भएपनि खुट्टा तान्ने प्रवृतिले राम्रो खेल हुन नसकेको उनले बताईन् ।
‘नेपालमा विदेशी प्रशिक्षक नै चाहिन्छ भन्ने छैन । यहाँका प्रशिक्षक पनि राम्रो हुनुहुन्छ । तर यहाँ आफ्नोलाई च्याप्ने स्वभावले सबै बिग्रिएको हो ।’
सागको तयारीका लागि माला थाईल्याण्ड पुगेकी छिन् । उड्नु अघि उनले भनिन्, एक हप्ता ट्रेनिङ गरेर भारतमा मेरी कोमसँग खेलेको थिए । अब दुई महिना ट्रेनिङ गर्न जान लागेको छु । अबको सागमा त्यसको प्रभाव देखिन्छ भन्ने आशा लिएको छु ।’
बक्सिङको विशेष प्रशिक्षण पोखरामा
बक्सिङ र पौडीका बिदेशी प्रशिक्षक नेपालमा
सागका लागि बक्सिङमा १६ खेलाडी छनोट
सागका लागि बक्सिङबाट ८ खेलाडी छनोट
रोशनी र निशा सेमिफाइनलमा
चर्चित भिडन्तमा वालीनमाथि फुरीको जित